Ciise Midnimo oo gool dhaliyay, guulna ku hogaamiyay KFUM - NorSom News
Ciise Midnimo oo gool dhaliyay, guulna ku hogaamiyay KFUM
Kaptankii hore ee xulka qaranka Soomaaliya iyo kooxdii xidigaha Elman, Ciise Aden Abshir (Midnimo) ayaa shalay markii labaad shabada u ruxay kooxda KFUM oo sadex iyo eber(3-0) ku dirtay kooxda Bryn. Midnimo ayaa daqiiqadii 24-aad ee ciyaarta gool madax ah ciyaarta ugu furay kooxda KFUM, iyada oo goolkan uu ahaa kii labaad oo uu dhaliyo mudadii uu kooxda la joogay.
Guushan maanta uu midnimo qaybta ka ahaa ayaa noqonaysa midii ugu horeysay oo ay kooxda KFUM la timaado mudo laba bilood ah, iyado oo kooxdu aysan badin lixdii ciyaarood ee ugu danbeysay. KFUM oo la daalaa dhacayso dhaawacyo tiro badan oo ay kooxda uga maqanyihiin laacibiin muhiim ah ayaa hada soo ciriirsatay kaalinta 11-aad ee horyaalka heerka labaad ee Norwey.
Midnimo oo KFUM kusoo biiray bilowgii sanad-ciyaaradkan ayaa kamid noqday kooxdada joogtada ah ee KFUM, isaga oo ciyaaray dhamaan 19-kii kulan oo ay kooxdu ciyaartay sanad-ciyaareedkan. Ciise oo waagii hore weerar uga ciyaari jiray xulka qaranka Soomaaliya ayaa hada xoreystay booska daafaca dhexe ee KFUM.
Previous articleCilmi-baaris: caruurta soomaalida iyo ajaaniibta kale lama geeyo goobaha caruurta caafimaadka maskaxdooda lagu baaro
Next articleMacalin Asad Qasim: Maamulka magaalada Drammen iyo kan gobalka Buskurud waxay dayaceen caruurta ajaaniibta ah